I-Apple Watch SE ehlaziyiweyo kunye nenye enomlingisi wezemidlalo we-2022 | Iindaba ze-iPhone
I-Apple Watch SE ehlaziyiweyo kunye nenye enomlingisi wezemidlalo ka-2022
UJordi Gimenez | 06/12/2021 11:00 | Apple Watch
Sifike esiphelweni sonyaka kwaye inkampani yeCupertino ilapha ngoku kweli nqanaba lokubonakala lityhafile. Ngesi sizathu, iindaba ezisemthethweni azihambi ngaphaya kweenguqulelo ezintsha zeendlela ezahlukeneyo zokusebenza kunye ne Imikhankaso yeKrisimesi yokunika izixhobo.
Kule meko amahemuhemu ezixhobo ezitsha ezinokwenzeka sele ziphethe abanye, njengoMark Gurman. Umhlalutyi owaziwayo ubonisa ukuba kunye ne-Apple Watch Series 8, i-Apple icwangcisa i Uhlaziyo lwe-Apple Watch SE kwaye mhlawumbi lukhetho lwezemidlalo ukuba abanye sele bebonisa ukuba inokufana noyilo lwembali yeCasio G-Shock.
Ngaba i-Apple Watch SE inalo utshintsho?
Kusenokwenzeka ukuba abaninzi basalindele inguqulelo entsha yewotshi ekuqaleni konyaka kodwa ngokwenene asikholelwa ukuba oku kunjalo. I-Apple Watch SE yangoku yasungulwa ngoSeptemba ka-2020 Kwaye eyona nto ikhuselekileyo kukuba iimodeli ezintsha, ukuba zifikile, ziya kwenza njalo kwinyanga enye ye-2022. Umbuzo apha kukuba le modeli idinga ngokwenene utshintsho kuba i-Apple inayo njengemodeli yezoqoqosho, ukusuka ekungeneni, kwaye yongeza Yintoni entsha inokwenza ixabiso lakho linyuke.
Kwimeko nayiphi na into, iinguqulelo ze-SE zihlala "zihlaziywa" kwezinye izixhobo kwaye ngoko Asikholelwa ukuba i-Apple iya kuphakamisa ixabiso lokugqibela lale modeli kakhulu, inokubamba ngexabiso elifanayo langoku kwinguqulelo entsha ngo-2022.
Kwelinye icala, ngokukaGurman, kukho ithuba lokuba i-Apple isungule imodeli yezemidlalo nexhathisayo. Le nto kuthiwa yiApple Watch entsha, iya kuba noyilo "oluqinisiweyo" olunokongeza imeko exhathisayo kwimikrwelo, amaqhuma, ukuwa nokunye. Kungenxa yoko le nto kukho intetho malunga newotshi ye-Apple enokwenzeka ilinganisa iwotshi yeCasio yasentsomini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » I-Apple Watch SE ehlaziyiweyo kunye nenye enomlingisi wezemidlalo ka-2022
I-WhatsApp ivavanya uyilo olutsha kwimiyalezo yelizwi kwi-beta yayo ye-iOS
Zonke iindaba ezivela kwi-Apple ka-2022 ngokutsho kukaGurman